Ku rakib oo isku xir mawduucyada SLiM | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Naqshad, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Ka dib codsiga Troll-ka aan jecel nahay: Courage, Waxaan u qorayaa maqaalkan si aan kuu tuso sida loo rakibo loona qaabeeyo mawduucyada SLiM. Wax runtii fudud.
1 Ku rakibida mawduucyada.
1.1 Gudaha Archlinux:
1.2 On Debian:
2 Ok horey ayaan u soo dajiyay oo aan isku dayay Sideen ugu ridayaa SLiM?
3 si aan kala sooc lahayn uga dhex xusho
Ku rakibida mawduucyada.
Waxay horeyba u keeneysaa qaar si caadi ah, in kastoo aan halkaan ka heli karno kuwo kale xitaa waxaan xitaa dhowr ka dhigay aniga qudhaydu waqti hore: Tema1 y Tema2. Mawduucyadani waa la soo dejiyaa, la furayaa oo la geliyaa / usr / share / caato / mawduucyada.
Si loo tijaabiyo mawduucyada iyada oo aan loo baahnayn in la xiro fadhiga, waxaan fureynaa terminal oo waxaan ku qori:
Ok horey ayaan u soo dajiyay oo aan isku dayay Sideen ugu ridayaa SLiM?
Waa wax aad u fudud, in la sameeyo waxaan fureynaa terminaal iyadoo la adeegsanayo tifaftiraha aan jecel nahay, waxaan wax ka bedelnaa feylka /etc/slim.conf:
Gudaha feylkaan waxaan ka raadineynaa khadka:
si aan kala sooc lahayn uga dhex xusho
Waana badaleynaa Default o magaca in uu yahay, oo leh magaca galka ay ku jirto mawduuca aan dooneyno inaan adeegsanno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Naqshad » Ku rakib oo isku xir mawduucyada SLiM
Wanaagsan, waa inaan sameeyaa Kuchiki Rukia oo aan dhigaa
Horaan u rakibay laakiin mahelo wax menu ah
Faylka miyaa labadiinuba u gudbaa mise waa uun Debian?
Waa labadeena .. menukee aad ka hadlaysaa?
Wax dambe ma ahan, labadeena ahaan ahaan waa qaab qoraal oo dhan
Mawduuca waa mid aad u fiican waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loogu rakibo albaabka 'Openuse'.
Ma aqaan sida loo rakibo SLiM on OpenSUSE, in kastoo aan qiyaasayo a:
Waa inay shaqaysaa. Qaabeynta waa inay ahaato mid isku mid ah.
cafi jaahilkayga, laakiin waa maxay caato?
wax sida gdm, kdm ...?
Laakiin aad ayuu uga fududyahay 😀
Bah nacaladda SLiM aniga iima shaqeyso, qalad ayey i siineysaa oo iima ogola inay soo gasho, waxay ahayd inaan galo qaabka qoraalka si aan mar kale u dhigo GDM, waxaan isku dayi doonaa maamule kale si aan u arko
Ma aha qaladka SLiM .. waan hubaa .. Malaha waa wax ku jira .xinitrc ama .xxukunkaaga
Waxay noqon kartaa laakiin ugu dambayntii waxaan dhigay LXDM
Salaan, tuto wanaagsan! Waxaan rajaynayaa inaad mar uun ii jawaabto! Talaabo talaabo talaabo ah wax walba oo qumman, marka laga reebo dhamaadka: mararka qaarkood waxaan ku raraa /etc/slim.conf madhan iyo waqtiyada kale xulashooyinka aad sheegto. Ma ogtahay waxa la samaynayo kiiskaas? Waxaan haystaa soo galitaankii Debian ee caadiga ah mana soo jiito dareenkeyga (bah, waxay si caadi ah u dooratay midka ugu xun ee ay awoodo, dhammaan heh casaan!)
Waxaan cadeynayaa in caato kadib -p / usr / share / slim / themes / la arko in mowduuca la rakibay laakiin markaan dib u bilaabo midka aan doorto ma muuqdo (markay culeys tahay /etc/slim.conf) laakiin midka in Debian doonayo
Waxaan rajeynayaa inaad iiga jawaabi karto!
Waa taas oo aanan fahmin waxa dhaca. Markaad gashid qalabka:
Qaabeynta SLiM miyaanay soo bixin?
Daaqad ayaa furan laakiin way banaan tahay. Arinta ugu yaabka badan ayaa ah in mar qura uu soo muuqday qoraalka iyo markii aan badalay magaca galka «sawirka faraha» waxa kaliya ee loo habeeyay soo galid asal ah oo ah mid kulul
Hagaag, taasi waxay dhacdaa markaad furto fayl badanaa aan jirin. Waqtigan xaadirka ah waxaan u maleynayaa inaad ku rakibtay Slim. Fur terminal oo geli:
oo ii sheeg waxa ku soo celinaya. By the way, waxaan kuu soo jeedinayaa in haddii dhibaatadu sii socoto, furo xarunteena oo aad ka heli doonto caawimaad dheeraad ah. 😉
Halkaas ayaan ku garaacay wuxuu i dhigay.
xididka @ debian: / guriga / claudio # ls -l /etc/slim.conf
-rw-r - r– 1 xidid xidid 3015 Mar 23 17:26 /etc/slim.conf
Aniguna waxaan ku cadeynayaa in caato -p / usr / share / caato / mawduucyo / Waxaan arki karaa sida login cusub u muuqan doono
Marka feylku wuu jiraa. Isku day inaad kula furto tifaftiraha qoraalka ...
Waad ku mahadsantahay jawaabaha, waxaan ku galayaa marxaladda layliska aqoon yar oo sifiican waa inaan u yara dhibto. Laga soo bilaabo tifaftiraha gedit waan furay oo waxaa jira qoraal. Waa tan sida ay u muuqato waxaanan u maleynayaa inay tahay inay ku shubato midka aan rabo gelitaanka.
Dhinaca kale, fayl kale ayaa soo muuqda caato.conf: laakiin leh: ku xayiran
Ma helin qiimaha
# Dariiqa, X serverka iyo doodaha (haddii loo baahdo)
# Xusuusin: -xauth $ authfile si otomaatig ah ayaa loogu lifaaqay
# Amarada joojinta, soo galida, iwm.
halt_cmd / sbin / xiritaanka -h hada
reboot_cmd / sbin / shutdown -r hada
console_cmd / usr / bin / xterm -C -fg cad -bg madow + sb -T "Soo galitaanka Console" -e / bin / sh -c "/ bin / cat /etc/issue.net; exec / bin / soo gal »
#dhiska_cmd / usr / sbin / hakinta
# Waddo buuxda oo ku socota xauth binary
# Faylka Xauth ee serverka
# Dhaqdhaqaaji tirada marka caato bilaabmeyso. Qiyamyada ansax ah: on | off
# lambarka on
Qari calaamadda jiirka (xusuusnow: lama shaqeynayo qaar ka mid ah WMs).
# Qiyamyo ansax ah: run | been ah
#qarsoon qarsoodi ah
# Amarkan waxaa la fuliyaa kadib soo galitaan guul leh.
# waad dhigi kartaa fadhiga% iyo% doorsoomayaasha mawduuca
# si loo xakameeyo bilaabida amarrada gaarka ah ee .xinitrc
# iyadoo kuxiran fadhiga la doortay iyo dulucda caatada ah
# FIIRO GAAR AH: haddii nidaamkaagu uusan lahayn bash waxaad u baahan tahay
# si aad u hagaajiso amarka iyada oo loo eegayo qolofka aad doorbidayso,
# ie loogu talagalay isticmaalka bilaashka:
# login_cmd exec / bin / sh - ~ / .xinitrc% fadhiga
login_cmd exec / bin / bash -login / iwm / X11 / Xsession% fadhiga
Amarada la fuliyo markay bilaabayaan iyo markay ka baxayaan fadhiga.
# Waxaa loo isticmaali karaa diiwaangelinta kalfadhiga X11
# sessreg. Waxaad isticmaali kartaa% isticmaalaha isticmaalaha
# fadhi bilow ah_cmd xoogaa amar ah
# sessionstop_cmd xoogaa amar ah
# Kubilow qaabka daemon. Qiyamyo ansax ah: haa | maya
# Xusuusnow in tan laga badin karo khadka taliska
# xulashooyinka "-d" iyo "-nodaemon"
# Kalfadhiyada la heli karo (midka hore waa kan caadiga ah).
# Magaca kalfadhiga hada la doortay waxaa lagu badalay galitaanka_cmd
# kor ku xusan, sidaa darteed amarkaaga soo galida ayaa la socon kara kal-fadhiyo kala duwan.
# fiiri feylka xinitrc.sample ee lagu soo raray ilaha caatada ah
kalfadhiyada caadiga ah, startxfce4, sanduuqa furan, ion3, icewm, wmaker, blackbox, cabsi badan
# La fuliyay markii la riixayay F11 (waxay u baahan tahay sawir)
Screenshot_cmd xoqin /root/slim.png
# fariin soo dhaweyn ah. Doorsoomayaasha la heli karo:% host,% domain
Welcome_msg Kusoo dhawow% host
# Fariinta kulanka. Loo diyaariyey magaca kalfadhiga markaad riixeyso F1
# fadhiga_msg Kalfadhiga:
# fariimaha xiritaanka / reboot
shutdown_msg Nidaamka ayaa joogsanaya…
reboot_msg Nidaamka ayaa dib u soo kabanaya…
# adeegsade asal ah, bannaanka ka tag ama ka saar khadkan
# si looga fogaado horay u soo rarka magaca isticmaale.
# Diirada saar goobta erayga sirta ah bilowga markii la dejiyo default_user
# U deji «haa» si aad awood ugu yeelato muuqaalkan
# Si otomaatig ah u gal adeegsadaha asalka ah (adigoon galin
# lambarka sirta ah U deji «haa» si aad awood ugu yeelato muuqaalkan
# mawduuca hadda jira, isticmaal liistada kala-go'an ee jaantuska si aad ugu sheegto jaangooyada
# si aan kala sooc lahayn uga xusho
# Furaha qufulka
# Diiwaanka gal
Faylasha qaabeynta mustaqbalka ama kuwa wata koodh ballaadhan, way fiicnaan lahayd haddaad isticmaasho dhaji noo, sidaas awgeed waxaan iska ilaalinaynaa in faallooyinka ay aad u ballaaran yihiin code
Waan gartay. Malaha dhibaatadu waa taas. Xaqiiji in kan aad furtay uu badbaadiyey sidii caato.conf oo mar dambe tirtir caato.conf:
Waayahay, oo sidee buu amarku u ekaan doonaa? rm /etc/slim.conf:?
Waan ku faraxsanahay caawimaadda!
Haa, ama haddii aad isticmaasho sudo:
Waana lagusoo dhaweynayaa, taasi waa waxa aan halkaan u joogno, inaad na caawiso.
Waan ku guuleystey inaan tirtiro laakiin markaan dib u bilaabo si aan u tijaabiyo, waxay sii wadataa inay soo rogto isla login oo aan ahayn kan aan doonayo.
Waxaan garwaaqsaday in doqon ahaan aanan samaynayn nano / iwm ... laakiin nano iwm / ... taasi waa sababta faylku ugu muuqday madhan. Sikastaba, wali lama xalin. Haddii aad ka fikiri karto jawaab, waa hagaag. Haddii kale, waxaan ka diiwaangelin doonaa golaha. Xaaladdaasna, waaxdee?
Hagaag, runti kama fikiri karo wax. Aniga inaad dib u eegto waxaas oo dhan markale. Fur terminal oo sidan dhig:
Haddii wax waliba ay ku soo baxaan sidii la rabay, waad u beddeleysaa sida aad rabto ka dibna badbaadi. Sidoo kale iska hubi in galka meesha mawduuca cusubi ka jiraa leeyahay rukhsadaha inta kale ee mawduucyada ah.
Waxaan u isticmaalaa "su" inay xidid noqoto, anigu garan maayo sababta laakiin "sudo" iima oggolaanayso inaan galo. Waxaan horeyba u heli karaa slim.conf sifiican waxaana u badalay magaca galka mowduuca aan doonayo.
Ma aqaano sida loo sameeyo "galka meesha mawduuca cusubi ka haysto ogolaanshaha mawduucyada kale." Malaha waa su’aashaas!
Waa maxay qaybinta aad isticmaasho? Dhibaatada sudo waxay tahay inaadan haysan wax la habeeyay, laakiin haye, taasi waa arin kale. Markaa waxaad horeyba u sameysay isbedelka slim.conf, ok. Hubi in aanu jirin fayl kale oo slim.conf ah oo dib u bilow fadhiga .. Mise hore ayaad yeelatay?
Debian 6.0 oo leh GNOME. Hada dib uma bilaabi karo maxaa yeelay waxaan bilaabay shaqo laakiin waxaan ka shakisanahay in isbadalka la adeegsaday.
Ha! Waxaan ula jeeday Logout, laakiin ok. Markaa adigu ii sheeg.
Weli waa isku mid! Isla galaaskii Debian ee pinky isla ahaa! Ahhhh heh!
Waan awooday inaan sameeyo, aad ayaad ugu mahadsantahay waqtiga iyo caawinta! Waxaan soo degsaday xirmo kale waxayna ka socotaa toban!
Bogga loogu talagalay Kordhinta Shell ee GNOME hadda wuu nool yahay